Fanambarana momba ny tsiambaratelo - GBL Europe BV
Momba ny GBL Europe BV
GBL Europe BV dia manaraka ny Data Protection Act 1998 (DPA) ary ny fitsipika momba ny tsiambaratelo sy ny Electronic (EC Directive) 2003, ary koa ny lalàna momba ny fiarovana ny data ankapobeny, nampidirina tamin'ny volana Mey 2018.
Ity politika politika momba ny tsiambaratelo ity dia mihatra amin'ny tranokala misy sy fananan'ny GBL Europe BV.
Inona ny vaovao no angoninay momba anao?
Manangona fampahalalana avy aminao izahay rehefa mameno ny endrika fisoratana anarana / famandrihana miaraka aminay, na an-tserasera na ivelan'ny Internet, mifandray amin'ny vokatra sy serivisy misy anay, ao anatin'izany (fa tsy voafetra): ny fahazoana ny bokinay mailaka; mametraka karazana fampiroboroboana fampiroboroboana miaraka aminay; na miditra am-barotra miaraka aminay.
Ny fampahalalana voaangona dia mety ho: ny anaranao, ny adiresy mailaka, ny adiresy paositra, ny laharana an-tariby, ny anaran'ny asa ary ny antsipirian'ny filaminana.
Mirakitra fifandraisana amin'ireo takelaka mailaka izahay (toy ny misokatra sy tsindrio) hanampiana anay handrefesana ny fahombiazan'ny serasera aminao.
Rehefa mitsidika ny tranokalanay (s), misy fampahalalana sasany mety ho angonina avy amin'ny fitaovanao. Ireto misy fampahalalana maro ireto dia ny adiresy IP, ny karazana fitaovana, ny laharana ID tsy manam-paharoa, ny kaody, ny vaovao momba ny fidirana, ny karazana navigateur ary ny dikan-javatra, ny toerana misy ny fizarana, ny rafitra sy ny sehatra, ny toerana ara-jeografika, ary ny fampahalalana teknika hafa.
Azontsika atao ihany koa ny manangona fampahalalana momba ny fomba nifanakalozan'ny fitaovana tamin'ny tranokala (anisan'izany), anisan'izany ny pejy nampidirina, fitsidihana daty sy fotoana, ny halavan'ny fitsidihana pejy sasany, ny fampahalalana momba ny pejy ary ny fampahalalana momba ny loharanom-baovao.
Azontsika atao koa ny manangona fampahalalana avy aminao misaraka rehefa miditra amin'ny karazan-dahatsary sasany ianao, ohatra ny taratasy fotsy na resaka chat live, na rehefa miditra amin'ny fifaninanana ianao na fanadihadiana.
Raha misoratra anarana ianao, ny mombamomba anao dia mety ho mifandray amina angon-drakitra voarakitra teo aloha momba ny fifandraisan'ny tranokala.
Ahoana ny fanangonana ny fampahalalana?
Mivantana rehefa misy ny kaonty mpampiasa.
Amin'ny tsy ankolafy, amin'ny alàlan'ny zatra fitadiavana, fampiharana amin'ny Internet sy ny sisa.
Mampiasà sonia sosialy - Azonao atao ny misafidy ny hamorona kaonty amin'ny fampiasana ny mombamomba anao. Hanontaniana ianao raha faly ianao mizara fampahalalana fototra amin'ny rafitray mba hamenoana ny antsipirian'ny kaontinao.
Ny fampahalalana momba ny tranokala dia nangonina tamin'ny fampiasana cookies (jereo eto ambany).
Ahoana no hampiasanay ny mombamomba anao?
Manangona vaovao momba anao izahay, mba hanoloranao ny vokatra sy ny serivisinao aminao amin'ny fomba mahomby sy marina. Azontsika atao ihany koa indraindray, mifandraika aminao amin'ny alàlan'ny paositra, an-tariby na mailaka momba ny vokatra sy serivisy hafa heverintsika fa mety ho mahaliana anao, na avy amin'ny GBL Europe BV na orinasa hafa ao anatin'ny vondrona fanompoana GBL Europe BV.
Mampiasa ny fampahalalana nangonina avy amin'ny tranokala izahay mba hanamboarana manokana ny fitsidihanao miverimberina ao amin'ny tranokalanay, ary manangona angon-drakitra ho an'ny tanjona famakafakana statistika.
Tsy hizara ny fampahalalana anao amin'ny hafa velively izahay raha tsy ekenao aloha.
Misy toe-javatra sasany, toy ny rehefa miditra amin'ny karazam-bidy sasany (ohatra taratasy fotsy na tranokala web), rehefa ampitao amin'ny fety fahatelo ny antsipirihanao. Mangatahana foana ianao hanaiky io hetsika io misaraka sy isaky ny fotoana, ary mety hisafidy ny tsy hiditra ao amin'izany atiny izany raha tsy tianao hozaraina ny antsipiriany.
Raha nisafidy ianao, ho ampahany amin'ny fisoratana anarana, handraisana tolotra manokana sy fampahalalana avy amin'ny ankolafy fahatelo dia mety handefa vaovao aminao izahay, amin'ny alàlan'ny mailaka, ho an'ny antoko fahatelo voafantina. Amin'izany toe-javatra izany, tsy zaraina amin'ny olona ny mailaka ary misy mailaka avy any aminay avy aminao.
Raha nifidy ny handray tolotra sy fampahalalana manokana ianao amin'ny alàlan'ny paositra sy / na telefaona, ny antsipiriany mety (na ny adiresy paositra na ny laharana an-tariby irery) dia zaraina hampiasa indray mandeha amin'ny ankilany misy fanontaniana. Ny andiany fahatelo dia voatery manao sonia fifanarahana miaraka aminay mba hahazoana antoka fa ny antontan-kevitra toy izany dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny alàlan'ny tanjona tokana ary tsy ampiasaina na zaraina.
Ny fidirana amin'ny fampahalalana sy ny safidinao
Ireo mpividy rehetra voasoratra anarana sy ireo mpamoaka takelaka imailaka rehetra dia manana kaonty miaraka aminay. Ny kaontinao dia ahafahanao misafidy izay fampahalalana azonao avy aminay, ary ny fomba handraisanao izany fampahalalana izany. Azonao atao ny misafidy ny loham-baovao isaky ny fotoana.
Ny fanesorana sy ny zonao hohadinoina
Raha tsy te handray na inona na inona intsony izahay, dia izao manaraka izao ny safidinao:
Zahao ny boaty 'Unsubscribe' ao amin'ny kaontinao. Izahay dia hitazona ny antsipirihany, fa raha tsy izany dia azo antoka fa voaroaka amin'ny lisitry ny lisitra hafa azontsika amin'ny daty aoriana. Tsy handray am-pifandraisana intsony aminay intsony ianao.
Raha te hampihatra ny zonao hohadinoina ianao dia tokony handefa mailaka [email voaaro] ary mangataha ho voafafa tanteraka ny kaontinao. Na izany aza, satria tsy manana firaketana momba anao intsony izahay sy ireo antsipirihany, dia afaka mahazo ny antsipirihanao ianao amin'ny hoavy (ho 'tombontsoa ara-dalàna'), ary noho izany dia mety hahazo vaovao avy aminay ianao amin'ny fotoana ho avy. .
Ampiasaina amin'ny tranokalanay (s) ny fahandroana cookies mba hanomezana traikefa mpampiasa tsara kokoa. Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny fametrahana rakitra kely an-tsoratra ao amin'ny fitaovanao hanara-maso ny fomba fampiasana ny tranokala, hanoratana na hanoratana raha nahita hafatra nasehonay izahay, mba hampidiranao ny tranokala, raha ilaina, mba hanaronana ny fidirana ary haneho adverts na afa-po.
Ny mofomamy sasany dia takiana hahafinaritra sy hampiasa ny fiasa feno amin'ny tranokalanay (s).
Ahitana rohy mankany amin'ny tranokala hafa ny tranokalanay. Ity politika momba ny fiainana manokana ity dia tsy mihatra afa-tsy amin'ity tranonkala ity sy tranokala hafa fananana sy ampiasain'ny GBL Europe BV. Raha, mandritra ny fitsidihanao ny tranokalan'ny GBL Europe BV, tsindrio ny rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo, dia tokony hitandrina ianao hamaky avy hatrany ny politikany manokana, izay mety tsy mitovy amin'ny anay.
Fanovana ny politikam-piainantsika
Izahay dia mitazona ny politika momba ny tsiambaratelo hojerentsika matetika ary hametraka fanavaozana amin'ity pejy ity izahay. Ity farany momba ny fiainana manokana ity dia nohavaozina farany tamin'ny 08 Aogositra 2018.
Azafady mba ampahafantaro anay raha manana fanontaniana momba ny politika momba ny tsiambaratelo izahay na fampahalalana izay hitanay momba anao:
Amin'ny alàlan'ny mailaka: [email voaaro]